Milatariga dalka Iraq ayaa sheegay inay weerar la heleen kolonyo baabuur ah oo uu la socday hoggaamiyaha Daacish Abu Bakar Al-Baghdadi, kadib weerar cirka ah oo ay ka fuliyeen gobolka galbeed ee Anbar.
“Ciidamada Cirka ee Iraq waxa ay fuliyeen weeraro geesinimo leh, oo ay la beegsadeen baabuurta dambiilaha argagixisada ah e Abu Bakr al-Baghdadi” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay ciidamada ammaanka ee Iraq.
Baghdadi ayaa waxa uu ku socda magaalada Karbala, si uu uga qeyb galo kulan uu la lahaa taliyayaasha Daacish, sida lagu yiri bayaanka. Waxaa loo maleynayaa, ayaa lagu sheegay bayaanka, in tiro ka tirsan hogaamiyayaasha Daacish lagu dilay ama lagu dhaawacay weerarka.
Illaa iyo hadda lama oga xaaladda al-Baghdadi, oo sheegtay inuu yahay hoggaamiyaha khaliifada Islaamiga ah ee Iraq iyo Syria.
Afhayeen u hadlay isbaheysiga la dagaalamaya Daacish Col. Steve Warren, oo Mareykan ah, ayaa sheegay inay arkeen warka kasoo baxay Iraq, balse aysan hayn wax xog ah oo ay ku xaqiijin karaan.
Sheegashooyinkii hore ee Iraq ee ahaa inay dileen ama dhaawaceen Baghdadi, ayaa isu beddelay kuwa la xaqiijin kari waayey, ama goor dambe beenoobay.